Okwu Mmalite - Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.
Dika ulo oru Sino-ndi ozo nke ndi China na ndi okacha amara na R & D, mmeputa na nkesa nke algae hydrocolloids, Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd., hiwere na 1990 ya na ulo oru agar na carrageenan buru ibu nke chere ihu na ulo na mba. ahịa.
Site na ịnabata ahịhịa mmiri si Indonesia na China dị ka akụrụngwa, Fujian Global Ocean na-adabere na teknụzụ nhazi ya dị elu na teknụzụ mmịpụta dị mma iji mepụta ngwaahịa ọ bụla nwere oke mma; anyị isi ngwaahịa bụ nri ọkwa agar, bacteriological agar, ozugbo soluble agar, carrageenan, agaro-oligosaccharide na ha compound ngwaahịa, ngụkọta kwa afọ mmepụta ikike nwere ike ruo 3000 tọn. Ngwaahịa anyị nyere ikike site na ISO, HALAL na KOSHER, nwekwara ike izute ụkpụrụ mba China na ụkpụrụ EU, ma ree ya na China dum ma kpụga ya na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Europe na America, wdg.
Dị ka isi ihe na mmiri biotechnology ngosi enterprise na China, Fujian Global Ocean emewo ma guzosie ike na miri emi na-omimi imekọ ihe ọnụ na mgbanwe na nnukwu nnyocha sayensị ewumewu na oru nke elu mmụta n'ụlọ na mba ọzọ; ya professionally mmepụta na mba ahịa na-ahapụ ụlọ ọrụ mmeri ahịa Ekele na cognition mgbe niile.
Site na ịgbaso echiche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-eme ka ị nweta ọhụụ na ọganiihu, na ịchụso ezigbo mma na ọrụ zuru oke, Fujian Global Ocean gbadoro anya ịnye ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi ngwaahịa na ọrụ nchekwa, ahụike na gburugburu ebe obibi.